Sheekada Stella: Ilmaha ka baqaya in loo masaafuriyo meel aysan aqoon - Telling the Real Story
Stella waa gabar Soomaaliyeed oo 16 jir ah kuna nool Sweden hooyadeed. Waxay ka soo tagtay Soomaaliya markii ay ahayd laba sano jir waxayna markii ugu horreysay timid Talyaaniga, halkaas oo ay ku noolaayeen dhowr sano ka hor inta aysan u dhaqaaqin Sweden. Stella waxay dhigataa dugsiga sare, waxay si aad ah ugu egtahay waxbarashadeeda iyo asxaabteeda waxayna rajeyneysaa nolosha dadka waaweyn iyo caqabadaha. Si kastaba ha noqotee, iyada iyo hooyadeed lama helin ogolaanshaha degenaanshaha, sidaa darteed sameynta qorshayaasha ayaa dhan ah macquul aheyn. Iskucelcelinta cabsida musaafurinta ayaa ah inaysan dareemeynin inay si buuxda u tahay Soomaali ama si buuxda u tahay iswiidhish; degenaansho la'aan, iyadu waa dhex taal.
Stella waxay isku dayeysaa inaysan hooyadeed kala hadlin arrimahan sababtoo ah ma rabto rabitaankeeda inay ka xanaajiso, laakiin waxay sheegtay inay murugo iyo niyad jab ka fikireyso iyada. Waxay isweydiineysaa waxa ay ku kaliftay arintan. Sweden waa wadan wanaagsan, waxay wax ku barta si adag waxayna leedahay saaxiibo badan, laakiin waxay dareentaa qof dibada ah oo walwal badan ka qabta mustaqbalka.
Stella waxay fahamsan tahay sababta hooyadeed u qaadatay Sweden: waxay rabtay sida ugu fiican iyada, oo ay ku jirto waxbarasho wanaagsan, daryeel caafimaad iyo nolol wanaagsan. Laakiin waxay su'aal ka qabtaa go'aankaas. Waxay xustay inaysan waligeed codsanin in halkaan la keeno. Waxay la yaabban tahay inay u wanaagsan tahay inaad u guurto meel leh dhaqan iyo deegaan aad uga duwan midkaaga. Stella ayaa tiri: "Waxaan fahamsanahay in dadku mararka qaar aysan lahayn ikhtiyaar oo ay tahay inay cararaan, laakiin haddii aad leedahay fursado kale, baar kuwaa intaadan dalkaaga ka tagin," ayay tiri Stella. Yaan laydin khiyaanayn sawirada guryaha waaween iyo baabuurta dhalaalaya, maxaa yeelay dadku been ayey sheegaan. Maxaad noloshaada khatar ugu gelineysaa uun si aad ugu dabaasho burqad aan halkaa ka jirin? ”